0.1 IQembu Lamazwe Elizwe, Lani, Lokha Lokukhuthazela Lokukhuthazela (EIG)
0.2 Ngamafuphi, ngempela, amakhulu kakhulu.
1 Izinkampani Zokusingatha kanye Nemikhiqizo ngaphansi kwe-EIG
2 Ngabe ukusingathwa kwemikhiqizo ye-EIG kukhona okuhle?
2.1 Akuzona zonke Izinhlobo ze-EIG ezifanayo
2.2 Izinketho: Imikhiqizo yokubamba Ye-non-EIG
2.3 Okuhlangenwe nakho kwakho?
IQembu Lamazwe Elizwe, Lani, Lokha Lokukhuthazela Lokukhuthazela (EIG)
Kulo myalezo sizobheka ngokucophelela ama-konglomerat amakhulu athatha izinkampani eziningi zokubamba iminyaka embalwa edlule – i-Endurance International Group – i-EIG.
I-EIG, eyake yaziwa njengeBizLand, mhlawumbe ingumdlali omkhulu kakhulu embonini yanamuhla yokubamba iwebhu. Le nkampani yaqala ukusungulwa njengenkampani yokubamba iwebhu ngo-1996 futhi iyi-HQ eBurblington, Massachusetts. Ngo-2011, i-EIG yatholakala ngabakwa-Accel-KKR kanye nabakwaGS Mitra Modal ngenani elingaveziwe.
Namuhla, inkampani kufakwe kuhlu ku-NASDAQ futhi zenani lama- $ 686,7 wezigidi (ukuhweba ngama- $ 3,51 – $ 7,74 kumaviki angama-52 adlule).
Ngalesi sikhathi sokubhala, i-EIG inamagama angaphezu kwe-80 web hosting ngaphansi kwesambulela sayo (ngaphezulu ngalokhu maduze) kanye namakhasimende e-4.9 akhokhela emhlabeni wonke.
Ngamafuphi, ngempela, amakhulu kakhulu.
Kodwa-ke, ukubheka okwenkampani Umphumela wamuva wezezimali, inkampani ingenisa imali engama- $ 277.2 wezigidi ngokulahleka okuphelele kwezigidi eziyi-12.3 zamaRandi ngonyaka Wezimali we-2019.
Bonke ababhalisile epulatifomu ye-EIG ngoDisemba 31, 2019 babeyizigidi ezingama-4.766; kuqhathaniswa nababhalisile abacishe babe yizigidi ezingama-5.217 ngoJuni 30, 2017 kanye nezigidi ezingama-5.011
ababhalisile ngo-31 Maret, i-2018.
Isifinyezo se-Endurance International Group Holdings, intengo yokwabelana ye-Inc ngonyaka edodule (ngoFebhuwari 2020).
Izinkampani Zokusingatha kanye Nemikhiqizo ngaphansi kwe-EIG
I-Endurance International Group – noma i-EIG yama-pendek – izambulela ngaphezu kwezinkampani ze-60, eziningi zazo ezinkampanini zokubamba iwebhu.
Okulandelayo uhlu lwezinkampani kanye nezinsuku zabo zokuthenga ze-EIG (lapho zikhona khona).
I-Orange encane – 2012
Sistem Informasi I-Berry LLC
I-Directi – 2014
I-Hostnine – 2012
Hamba nami manje
I-JustHost – 2011
I-Networks Web Hosting
I-SEO Web Ukusingathwa
I-Webzai – 2014
* Qaphela: Ama-Hyperlink akhomba ukubuyekezwa kwethu kuma-hosting abathintekayo.
* Futhi hlola uhlu lukaMichael lemikhiqizo ye-80 + EIG lapha: http://researchasahobby.com/full-list-eig-hosting-companies-brands/
Ngabe ukusingathwa kwemikhiqizo ye-EIG kukhona okuhle?
Yebo, inkampani inezinhlanganisela ezithile eziqondile – thatha, isibonelo, kungcono Isilinganiso ku-BBB.
Isizathu se-BBB sezilinganiso
Ubude besikhathi sebhizinisi sisasebenza.
Ivolumu yesikhalazo efakwe neBBB ebhizinisini laleli fani.
Impendulo yezikhalazo ze-365 ezifakwe ebhizinisini.
Isixazululo sesikhalazo (s) esithunyelwe ebhizinisini.
I-BBB inolwazi olwanele lwangemuva kuleli bhizinisi.
Tidak ada foto – tidak ada daftar untuk saya yang baru saja ditambahkan eminingi yokubamba ngaphansi kolawulo lwayo – ngizokushiya ukuthi unqume.
Akuzona zonke Izinhlobo ze-EIG ezifanayo
Ulasan dari cha – kubalulekile ukuqonda ukuthi akuyona yonke imikhiqizo ye-Endurance efanayo.
Yonke menjadi Etholakalayo ivela engozini kanye nokungaqiniseki – futjogoba abanye bangalindela, ezinye ze-EIG merek "zishiywa ukuthi zifile" ngenkathi i-konglomerat iqhubeka ikhula futhi ithululela izimali kwezinye izindawo.
Saya-BlueHost, ngokwesibonelo, iqhubeke ukuchuma ngaphansi kokuphathwa kwayo okusha. Inkampani ibuye yathuthukisa amawebhusayithi ayo, yengeza nezinhlu ezintsha zokubamba ezinhlelweni zabo, futhi yahlala njengenye yamagama aphezulu embonini yokusingathwa. Akunakushiwo okufanayo nge-eHost, HostClear, ne-IX Web Ukusingathwa – lezi zinhlobo zemikhiqizo azisekho namuhla futhi abasebenzisi bazo badluliselwe kwamanye amapulatifomu.
Okunye okutholwe yi-EIG akuzange kumenyezelwe / kumenyezelwe kahle. Isi untuk Singel Anda dapat menemukanSitus web Anda akan menerima ku-EIG dari kokuthi bavuselele imigomo yabo yesevisi nemininingwane yokukhokhisa.
Izinketho: Imikhiqizo yokubamba Ye-non-EIG
Anda juga dapat menemukan ukhetha okunye-nansi izinkampani ezimbalwa ezingabanjwanga nge-EIG engiziphakamisayo (chofoza isixhumanisi ukuze ufunde ukubuyekezwa kwami).
Ukusingathwa kwe-A2 – Iseva esheshayo neyithembekile, intengo enengqondo.
I-Hostinger – Ukukhetha okuphansi futhi okubanzi ezindaweni zeseva.
InMotion Hosting – Ikhaya le-Web Hosting Rahasia Eliveziwe!
Interserver – I-Murah dan fleksibel yokusingatha umhlinzeki.
SiteGround – Okusheshayo, okunokwethenjelwa, nokuningi kwezici zenkambiso (I-SiteGround Super Cacher iyi-stunner); kodwa zithandwa kakhulu.
Okuhlangenwe nakho kwakho?
Uyini umuzwa wakho kuze kube manje ngezinsizakalo zokubamba iwebhu ze-Endurance kuze kube manje? Sicela wabelane nathi ku-Twitter.
مارک های میزبان Uhlu olugcwele lwe-EIG (+ Isiphakamiso se-Hosting E-Non-EIG)
Uhlu olugcwele lwe-EIG Marchi di hosting (+ Isiphakamiso se-Hosting E-Non-EIG)
Uhlu olugcwele lwe-EIG Hosting Marke (+ Isiphakamiso se hosting za E-Non-EIG)